Metal Sheet nekusimbisa, nebefu Machine
Cold Yakapetwa Ribbing Machine
SHIPPING NEWS -AUTOMATIC SHEET KUCHENGA ZVINHU
ne admin pane 2021-06-02
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD, ine chiratidzo cheCORENTRANS®, sehunyanzvi hwekutengesa simbi yekugadzirisa michinaS uye mhinduro dzakabatana. Kubva payakavambwa muna 2010, CORENTRANS® yakazvipira kupa Yakakwira-Yemhando simbi michina & mhinduro dzakabatana. ● Basa ...
China yemitengo yesimbi inokwira rekodhi mbishi zvinhu zvemari
ne admin pane 2021-05-13
Vanoda kusvika zana vekuChina vanogadzira simbi vakagadzirisa mitengo yavo kumusoro nemusi weMuvhuro pakati pekurehwa kwemitengo yezvinhu zvakagadzirwa simbi simbi. Mitengo yesimbi yanga ichikwira kubvira Kukadzi. Mitengo yakakwira 6.3 muzana muna Kubvumbi mushure mekuwana kwe6.9 muzana munaKurume uye 7.6 muzana pamwedzi wapfuura, accor ...
C ziviso chekuwedzera mukutumira mitero
ne admin pane 2021-05-12
Maersk akafanotaura kuti mamiriro akadai sekupihwa kwezvitoro uye kushomeka kwemidziyo nekuda kwekuwedzera kwekuda kucharamba kuchienderera kusvika kuchina yechina ya2021 vasati vadzokera pane zvakajairwa; Evergreen Marine General Manager Xie Huiquan akataura zvakare kare kuti kuzara kunotarisirwa kuve ...
Chii chinonzi Slitting Line
ne admin pane 2021-04-29
Slitting Line, inonzi slitting muchina kana longitudinal yekucheka mutsetse, inoshandiswa kusunungura, kutsemura, kudzoreredza simbi rolls mukuda kwehupamhi simbi. Inogona kuiswa kuitisa iyo inotonhora kana inopisa inopisa yakakunguridzirwa simbi coil, Silicon simbi coils, tinplate coils, Stainless simbi a ...
OKUONGORORA NEWS - ANOKWANA ANGURE / U-CHANNEL PURLIN MILL
Sezvo kufamba kwepasirese kwepasirese kusiri kwese kuvhurika kwenguva iripo, mutengi anoongorora zvinhu nekutsvaga nyanzvi yechitatu-bato rekuongorora. Uye sekureva kweshumo yekuongorora yakapihwa nesangano kusaina gwaro rekuongorora, ronga ...
Chii Chinonzi Wire Drawing Machine
ne admin pane 2021-04-27
Iyo tambo yekudhira muchina inoshandisa iyo yesimbi epurasitiki hunhu hwesimbi waya, dhonza iyo simbi waya kuburikidza necapstan kana koni pulley ine mota dhiraivha uye yekufambisa system, nerubatsiro rweiyo yekudhira mafuta uye kudhirowa inofa inogadzira epurasitiki deformation kuti uwane inodiwa diamete. ..
KUDZIDZA NHAU - TM76
ne admin pane 2021-04-16
Professional nokutengesa simbi kugadzira michina. Batsira vatengi kukudza mabhenefiti uye nekukurumidza kugadzirisa matambudziko emuno ekugadzira. Isu takatumira kunze iyo chubhu chigayo mutsara kuNigeria, Turkey, Iraq, uye Russian pamusoro pemakore. Nemitengo yesimbi yepasi rose ichikwira, uye nemhedzisiro inowedzera kumagumo-prod ...
ne admin pane 2020-12-16
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD. iri mu ROOM A309, NO.7178, ZHONG CHUN ROAD, MIN HANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA. Pakutanga kwekugadzwa kwayo, kambani yakavamba makambani ekunze akakodzera muHong Kong. Kunyanya ipa michina michina uye zvishandiso, zvemagetsi ...
Yakakwira frequency yakakosheswa pombi michina kunyanya ine uncoiler, yakatwasuka musoro muchina, inoshanda yekumisikidza muchina, shear garo welder, yekuchengetera mhenyu sleeve, kugadzira sizing muchina, wemakomputa kubhururuka saha, azvikuya musoro muchina, hydraulic bvunzo muchina, donha roller, flaw yekuona michina, baler , mhoro...
The Market Tarisiro Welded Pipe Equipment Zviri chaizvo Broad
Welded pombi michina indasitiri inogara kwenguva refu, uye nyika nevanhu vanoda indasitiri yakadaro! Mukuita kwekusimudzira kwenyika, kudiwa kwesimbi kuri kuwedzera, saka chikamu chepombi yesimbi mukugadzirwa kwesimbi iri kukura nekukura. Pipe kugadzirwa kunogona ...
Zvakanakira Stainless Simbi Pipe Welding Machine
Stainless simbi mutopota wekugadzira muchina unonyanya kushandiswa kune inoenderera ichigadzira maitiro esimbi isina simbi uye kabhoni simbi profiles, senge dzeraundi, mativi, akaumbiridzwa, uye macomputer mapaipi, ayo anogadzirwa kuburikidza nekufukura, kugadzira, argon arc welding, welding seam grin .. .
Kugadziriswa kweiyo Stainless Simbi Pipe Kugadzira Machine
Nekuvandudzwa kwemaindasitiri, iko kushandiswa kwesimbi isina simbi-pombi yekugadzira muchina iri kuramba ichiwedzera nekuwanda, kunyangwe kugadziriswa kwemidziyo yega yega iriko, inokanganisa zvakananga mhando yekugadzirwa, pamwe nehupenyu hwebasa remidziyo. Enda ...
China simbi mitengo yakakwira pa recor ...
OKUONGORORA NEWS - ANOKWANA ANGURE / U-CHANNEL ...